मोबाइल सेवाको गुणस्तरबारे अध्ययन रिपोर्ट सार्बजनिक, कुन सेवामा को अगाडी ? - Dainikee News::
मोबाइल सेवाको गुणस्तरबारे अध्ययन रिपोर्ट सार्बजनिक, कुन सेवामा को अगाडी ?
काठमाडौं, कात्तिक २८ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रमुख मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीको सेवाको गुणस्तर परीक्षण गरि प्रतिबेदन सार्बजनिक गरेको छ । प्राधिकरणले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार सेवाको गुणस्तर सम्बन्धमा विभिन्न मापदण्ड र सूचकमा नेपाल टेकिलम र एनसेलकै बढी प्रतिस्पर्धा देखिएको छ भने इन्टरनेट सेवामा भने स्मार्ट टेलिकम अगाडी देखिएको छ ।
प्राधिकरणले काठमाडौंको कमलादी, पुतलीसडक, सिंहदरवार, थापाथली, त्रिपुरेश्वर, सुन्धारा, जैसीदेवल, बसन्तपुर, क्षेत्रपाटी, असन, न्युरोड, रत्नपार्क, जमल, पकनाजोल सोह्रखुट्टे, अनामनगर, विजुलीबजार, नयाँबानेश्वर, भीमसेनगोला, थापागाउँ, मिलनचोक, बत्तीसपुतली, पुरानोबानेश्वर, मैतिदेवी, घट्टेकुलो, डिल्लीबजार, कमलपोखरी, नक्साल, नागपोखरी, गैरीधारा, टंगाल, भाटभटेनी, विशालनगार, गहनापोखरी, हाँडीगाउँ, भत्केको पुल र मित्रपार्क क्षेत्रमा सेवको गुणस्तर परीक्षण गरेर रिपोर्ट निकालेको जनाएको छ ।
प्राधिकरणले असोज ११ देखि गते २५ सम्म भ्वाइस तथा इन्टरनेटमा चाप पर्ने विहान र बेलुकीको समयमा ड्राइभ टेस्ट विधिमा परीक्षण गरिएको बताएको छ ।
प्राधिकरणले गरेको अध्ययनमा कल स्थापित हुने सफलताको दरमा नेपाल टेलिकम ९८.२६ प्रतिशतसहित पहिलो स्थानमा छ । एनसेलको ९७.७७ प्रतिशत कल सफल हुने गरेको पाइएको छ भने स्मार्टको ९२. ३९ प्रतिशत कल सक्सेस हुुने गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । कल सक्सेस मापदण्डमा प्रमुख तिनै टेलिकम कम्पनीहरु असफल भएका छन् । प्राधिकरणले ९९ प्रतिशत कल सफल हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले यस्तो समयसीमा ५ सेकेण्ड तोकेको भए पनि कुनै पनि कम्पनी यसमा पनि सफल हुन सकेका छैनन । कल स्थापित हुन सबै भन्दा छिटो एनसेलमा ८.४८ सेकेण्ड लाग्यो भने टेलिकममा ११.४८ सेकेण्ड र स्मार्ट टेलिकममा १३.७१ सेकेण्ड देखिएको छ ।
टेलिकमका १.७४ प्रतिशत कल मात्रै स्थापित भएनन् भने एनसेलको २.२३ र स्मार्ट टेलिकमको ७.६१ प्रतिशत डायल भएका कल लाग्दैनन् भन्ने यस अध्ययनमा देखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
आफैं फोन कल सम्पर्क बिच्छेद हुने समस्या भने सबै सेवा प्रदायकमा देखिएको छैन । प्राधिकरणले यस्तो दर २ प्रतिशत बढी हुन नहुने नियम बनाएको छ ।
त्यस्तै इन्टरनेट सेवाको गुणस्तरमा भने स्मार्ट टेलिकम अगाडी देखिएको छ । प्राधिकरणले इन्टरनेट परीक्षण गर्दा www.facebook.comमा पिंग हुन टेलिकममा १४० मिलिसेकेण्ड लाग्यो भने एनसेलमा १८० र स्मार्टमा १५० मिलिसेकेण्ड ।
वेबपेज लोड हुन भने एनसेलमा छिटो हुने देखियो । एनसेलमा ७.३६ सकेण्डमा वेबपेज लोड भयो भने टेलिकममा १६.८९ सकेण्ड लाग्यो । स्मार्टमा २०.७९ सेकेण्ड लागेको देखियो ।
वेबपेज लोड हुने सफलताको दरमा स्मार्ट अघि देखिएको छ भने फाइल डाउनलोड हुने सफलतको दरमा पनि स्मार्ट नै अग्रस्थानमा छ ।
फाइल डाउनलोड गर्दा डाटाको बहावमा सबै भन्दा अघि स्मार्ट टेलिकम छ ।
पूर्ण प्रतिबेदन हेर्नुहोस
प्रकाशित मिति: बुधबार, कार्तिक २८, २०७५ /Wednesday, November 14th, 2018, 9:58 pm